Dib u soo galid / (COSA)
Burlington CJC wuxuu ka shaqeeyaa inuu kordhiyo la xisaabtanka iyo taageerada dadka ku soo laabanaya Burlington oo ka mid ah xabsiyada.
Awoodooda ay ku taageeri karaan naftooda kuna noolaan karaan nolol wax soo saar leh ayaa muhiim u ah amniga iyo caafimaadka bulshadayada.
Wareegyada Taageerada iyo La Xisaabtanka (COSA)
Ujeedada koowaad ee barnaamijka CoSA waa "dhibanayaal dambe ma jiraan." CoSA-yadu waxay bixiyaan hanaan dib loogu soo celiyo cadaalada iyagoo taageeraya, dhisaya, isla markaana dayactiraya qaababka caafimaad ee ay ugu noolyihiin dambiilayaasha halista ah ee dambiyada gala markii ay bulshada ku soo noqdaan.
Kooxaha CoSA ama “wareegyada” waxaa ka mid ah 3-5 mutadawiciin tababaran iyo xubin shaqaale ah oo usbuuc walba la kulma xubinta muhiimka ah si ay uga caawiyaan inay horumariyaan xiriiro caafimaad leh, maareeyaan nolol maalmeedka, una hoggaansamaan filashooyinka soo deynta ka dib. Maaddaama xubinta aasaasiga ahi ay korayso oo ay dib u dhisayso isku xirnaanta bulshada, CoSA waxay u dabaaldegtaa guulahooda iyada oo la taageerayo kala-guurkooda iyada oo loo marayo halganka maalinlaha ah iyo caqabadaha iman kara.
Tabaruceyaasha CoSA waxay lagama maarmaan u yihiin matalaadda isku xirnaanta ixtiraamka, isfahamka, iyo dhismaha khibrada nolosha dadka kale. Kala duwanaanta ka jirta tabarucayaasha CoSA ee fikirka, da'da, khibrada, iyo aragtida ayaa matalaya bulshada guud ahaan.
Si aad si qoto dheer uga fiirsato barnaamijka CoSA, ka hel Bess O'Brien dokumentari, Coming Home.
Socodka Kheyraadka iyo Taageerada Dib-u-habeynta Bulshada
Burlington CJC's Resource Navigation & Community Re-entry Support waa adeeg muddo-gaaban ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo kuwa dib ugu soo laabanaya bulshada ka dib markii ay ku xirnaayeen ku-meelgaarnimadooda. Adeegyadu waxaa ka mid ah taageero ballaaran oo ay ka mid yihiin mudnaanta baahiyaha, raadin shaqo, iyo u diritaanka hay'adaha maxalliga ah iyo adeegyada bulshada.
Macluumaadka ku saabsan CoSAs iyo Kheyraadka Navigation & Taageerada dib u soo celinta bulshada, la xiriir Stuart Recicar (802) 540-1719 ama srecicar@burlingtonvt.gov.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan tabaruca, fadlan kala xiriir Rachel Jolly (802) 865-7185 ama emayl rjolly@burlingtonvt.gov
laga bilaabo filimka Bess O'Brien ee Imaatinka Guriga